Gaadiidka | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
La cusbooneysiiyay Maarso 2021
Laga bilaabo Janaayo 19, 2021, xadeynta awooda fuushan ee fasalada K-5 waxaa laga tirtiray basaska iskuulka. Waxaa jiri doona kuraas xanniban xaga hore ee baska si loo ilaaliyo 6 fuudh masaafada udhaxeysa wadaha iyo dhamaan wadayaasha.
Laga bilaabo Maarso 15, 2021, xaddidida awooda fuushan ee fasalada 6-12 waa la tirtiray.
Macluumaadka hoose wuxuu khuseeyaa dhammaan wadayaasha:
Ardayda waa in la diiwaan geliyaa loona ogolaadaa inay raacaan basaska iskuulka
Baasaboorka baska looma siin doono ardayda inay raacaan bas kasta oo kale wakhtigan.
Kuraasta ayaa loo qoondeyn doonaa.
Ardayda iyo qoysasku waa inay sameeyaan shaashad is-caafimaad ka hor intaanay iskuulka dhigan maalin kasta
Waalidiintu waxay u baahan yihiin inay sameeyaan is-qiimeyn caafimaad oo carruurtooda ka hor inta aan loo dirin dugsiga. Baadhitaanka astaamaha waa in la sameeyaa si loo hubiyo in ardaygu aanu qabin qufac, qandho, dhaxan, muruq xanuun, madax xanuun, neefta oo ku qabata ama neefsashadu dhib ku tahay, cunaha oo xanuuna, iyo dhadhan cusub ama ur.
Haddii ardaygaagu leeyahay astaamahan, guriga joog; baska ha fuulin.
Meesha basku istaago
Ardayda iyo qoysaska waa inay dhowraan masaafada lix-cagood oo u dhow ardayda oo dhan inta ay ku sugayaan joogsiga baska.
Ka fogow taabashada jirka ardayda kale ee joogsiga baska.
Diyaar u noqo inaad fuusho oo aad ka dejiso baska si habsami leh oo aad u ilaalineyso lix cagood oo ka fogaysiinta bulshada.
Nadaafadda iyo amniga basaska iskuulka
Dhammaan ardayda waa inay gacmahooda maydhaan kahor intaysan imaan goobta basku istaago.
Dhammaan ardayda marwalba waxaa looga baahan doonaa inay xirtaan maaskaro wajiga la ansaxiyay inta ay saaran yihiin oo ay raacayaan baska dugsiga Amarka Fulinta ee 20-81.
Taxaddarrada amniga ee Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka ay qaadi doonaan sannad-dugsiyeedkan
Dhammaan basaska waxaa lagu nadiifin doonaa jeermis dilaha oo muddo dheer soconaya laba jeer maalintii, ka dib wadada subaxnimo iyo galab ee qandaraasleyaashayada basaska.
Koofiyadaha hawo fidinta iyo daaqadaha baska ayaa qayb ahaan loo furi doonaa si loo helo hawo nadiif ah markay suurtagal tahay.
Su'aalo? Fadlan la xiriir Waaxda Gaadiidka ee transportation@minnetonkaschools.org
Ku saabsan Gaadiidka
Dhammaan xubnaha bulshada ayaa ka tirsan kooxda badbaadada baska dugsiga waxayna wax weyn ka beddeli karaan amniga ardayda markay raacaan, raacaan ama ka baxaan basaska dugsiga.
Adeegga baska waxaa la bixiyaa marka horeba, marka horeba adeeg ayaa la bixiyaa. Si loo hubiyo in baska la baaraandegi doono loona qaybin doono ka hor bilowga dugsiga, diiwaangelinta waa in la dhammaystiro ugu dambayn Juun 9 .
FIIRO GAAR AH : Goobaha joogsiga basku way isbeddeli karaan hadba sida ay degmada u ogoshahay iyadoo lagu saleynayo diiwaangelinta basaska iyo baahiyaha xaafadda dadka deggan. Isla joogsiga basku lama damaanad qaado sannad ilaa sannad.
Joogsiga baska degani waa IN KA BADAN laba mayl dugsiga
Qawaaniinta gobolka Minnesota waxay u baahan tahay in degmo dugsiyeedyadu ay bixiyaan gaadiid — oo aan wax lacag ah looga qaadaynin - dhammaan ardayda deggan ee baskoodu istaago uu wax ka badan laba mayl u jiro dugsiga ay dhigtaan
Joogsiga baska degani waa wax ka yar labo mayl dugsiga
Degmadu waxay qiimeysaa khidmadda gaadiidka basaska ardayda joogsigooda baska ee deggan ay wax ka yar laba mayl u jiraan dugsiga ay dhigtaan.
Khidmadda gaadiidka sanadlaha ah waa $ 100 iyadoo qiimaha ugu badan qoyskiiba yahay $ 250 sanadkii. Kharashka qoyska waxaa lagu qiimeyn doonaa Skyward ardayga ugu yar ee baska raaci doona Oktoobar.
Ardayda ka diiwaangashan furan
Degmadu ma siiso basas dheeri ah ardayda ka diiwaangashan furan; hase yeeshe, waaliddiinta waxaa laga yaabaa inay iska diiwaangeliyaan bas jira oo ilmahoodu la kulmi karo oo raaci karo. Haddii joogsiga baska ee deggan uu wax ka yar laba mayl u jiro dugsiga, qoysaska ka diiwaangashan furan ayaa la qiimeyn doonaa khidmadda gaadiidka baska (kor eeg).
Meeleynta basaska dugsiga hoose, dhexe iyo sare
Shaqooyinka basaska ayaa la soo diri doonaa dhammaadka bisha Ogos.
Khidmadda gaadiidka sanadlaha ah waa $ 100 iyadoo qiimaha ugu badan qoyskiiba yahay $ 250 sanadkii. Waxaad ka dhigi kartaa $ 50 deebaaji ardaykiiba marka loo eego wadarta guud ee khidmaddaada, iyadoo hadhaaga haray uu dhacayo Oktoobar 31.
Foomka Khidmadda Diiwaangelinta Basaska Gaadiidka
Haddii reerkaagu uqalmo Barnaamijka Qado Dugsiga Bilaashka ah iyo Qiima dhimista, fadlan buuxi Foomka Khidmadda Diiwaangelinta Baska Gaadiidka
Codsiga Sannadlaha ah ee Xannaano-maalmeedka, Beddelka, ama Gaadiidka Diiwaangelinta Furan
Haddii aadan ahayn qoyska koowaad oo aad u baahan tahay gaadiid kale, fadlan buuxi Codsiga Sannadlaha ah ee Xannaano-maalmeedka, Beddelka, ama Foomka Gaadiidka Diiwaangelinta Furan .
Ardayda isqorista furan ee adeegsan doonta baska degmada waa inay buuxiyaan foomkan sanad walba, taasoo muujineysa joogsiga baska ee xadka degmada ee ardaygu isticmaali doono.
Ka wada shaqeynta safar badbaado iyo raaxo leh
Waa xaq arday kasta in loola dhaqmo si macquul ah oo xushmad leh ha ahaato iskuulka ama baska iskuulka. Marka carqaladeynta ka dhacdo baska iskuulka waxay badanaa la xiriiraan dhaqanka ardayda. Arrimo ayaa ka dhalan kara ficillada hal arday, isdhexgalka ardayda dhowr ah ama isdhexgalka ardayda iyo darawalkooda. Waxaan jeclaan laheyn inaan si dhaqso leh wax uga qabano arimahan anshaxa ah, ka hor inta aysan noqon dhibaato aad u daran ama aan gaarin heerka dhibaataynta.
Sida caadiga ah, wadayaasha baska iskuulku waxay saxaan ama soo sheegaan dhaqanka sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah marka la arko ka dib. Si kastaba ha noqotee, waxaa jiri kara waqtiyo markii dhibaatooyin la xiriira dabeecadda ay dhacaan kuwaas oo aan u fiicnayn ardayga, laakiin aan si dhakhso ah ugu caddayn darawalka.
Fadlan ha ka waaban inaad ka warbixiso (oo ku dhiirrigeli ilmahaaga inuu soo sheego) dhacdooyinka dhibaataynta ee laga yaabo inaanay ku soo gaadhin dareenkeenna xagga xiriirka maalinlaha ah.
Anaga oo ka mid ah kooxdaada gaadiidka dugsiga, waxaa naga go'an hadafka ah inaan siino basas badbaado iyo raaxo leh ardayda oo dhan maalin kasta. Wadashaqeyntaada marwalba waa la qadarinayaa caawinta si loo gaaro hadafkan.